Igbo, John: Lesson 123 - Jizọs pụtara n'ihu ndị na-eso ụzọ ya na Tọmọs (Jọn 20:24-29) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 123 (Jesus appears to the disciples with Thomas)
24 Ma Tọmọs, bụ otu n'ime mmadụ iri na abụọ a kpọrọ Didymọs, anọghị ha mgbe Jizọs bịara. 25 Ya mere ndi nēso uzọ-Ya siri Ya, Ayi ahuwo Onye-nwe-ayi. O we si ha, Ọ buru na agaghm ahu akwukwọ-mbọ ahu n'aka-Ya, tukwasi akam n'aka-ya, m'gaghi-ekwe.
Echela na ndi obula nile megidere Mo Nso; ma ọ bụghị onye ọ bụla nke na-ajụ ịgba àmà gị bụ aghụghọ ma ọ bụ na-ala n'iyi. N'ebe a John na-egosi na n'etiti ọtụtụ ihe mere na ụbọchị iri anọ tupu Kraist arịgoo, e nwere otu ihe dị iche. Nke a na-egosi otú amara si eme ka okwukwe dịrị n'ime obi mmadu, ọ bụghị site na ọrụ, ọgụgụ isi ma ọ bụ n'echiche, mana site na amara na ebere nanị.
Tọmọs bụ onye na-enweghị atụ, ọ bụ nanị akụkụ ahụ dị egwu nke ihe omume. Ọ ghaghị ịchọpụta ihe omimi nke okwu ahụ iji ruo eziokwu doro anya (Jọn 11:16, 14:5). Ọ na-eche echiche, na-edozi nsogbu uche. O huru na onwu nke Kraist bu ihe omimi nke ndu. Ọ malitere iche na gburugburu ndị na-eso ụzọ ma hụghị Jizọs na Sunday mbụ ahụ mgbe Jizọs pụtara n'etiti ndị na-eso ụzọ ya.
Tọmọs nwere ike ikwu na ọdịdị ahụ bụ ihe efu nke Setan - na mmụọ ọjọọ dị n'ụdị nke Kraịst iji duhie ha. Ọ bụghị ihe ijuanya na ọ nọgidere na-agba akaebe banyere ihe merenụ, na Jizọs abịawo n'onwe ya. A gaghị ekwenye ya ma ọ gwụla ma ọ na-enwe mmetụta nke akara nkwụ. N'ụzọ dị otú a, ya na Chineke kwenyere na ya kwere, na-achọ ka ọ hụ tupu ya atụkwasị obi.
Ya mere o laghachiri n 'ulo ndi nazo ndi juputara n'ori n'ihi nkpughe nke Kraist nye ha. Otú ọ dị, ọ dị mwute, na-ekwu na ọ chọrọ ijide n'aka na Jizọs ebiliwo.
26. Ma mb͕e ubọchi asatọ gasiri ndi nēso uzọ-Ya nọ nime, Tọmas we nọyere ha. Jizos we bia, mechie ọnu-uzọ-ama, guzo n'etiti ya, si, Udo diri gi. 27 O we si Tomas, Biaru nkpisi-aka-gi n'ebe a, hu kwa akam. Bịa ebe a aka gị, tinye ya n'akụkụ m. Gi onwe-gi ekwela ekwe, kwere. 28 Ya mere Tọmọs zara ya, si, Onye-nwem na Chinekem.
Mgbe izu ole na ole gasịrị, Jizọs pụtara n'ihu ndị na-eso ụzọ ya ọzọ. Ụjọ ka na-atụ ha ma kpọchie ụzọ. Ahụ Kraịst, nke e si na ndị nwuru anwu bilie, banye n'ime ụlọ n'enweghị nsogbu ọ bụla. O jiri udo ya gọzie ha, na-agbaghara ndị na-eso ụzọ ya na-adịghị ike mgbaghara.
Tọmọs hụrụ Onyenwe ya anya na-emeghe anya mgbe ọ nụsịrị olu ya. Jizọs hụrụ ha niile, anya ya na-atụgharị obi abụọ Tọmọs na anya Chineke. Ọ na - agwa Thomas ka ọ metụ ya aka, n'adịghị ka iwu o nyere Meri Magdalin, "Na-emetụ aka, na-eche, na m bụ ezi mmadụ, nke nọ n'etiti gị." Jizọs gwara ya ka ọ ghara ịhụ akara nke mbọ ahụ ma "bịaruo nso ma tinye mkpịsị aka gị na ncha ma kwere."
Ọ gbara onye na-eso ụzọ ya na-ala azụ ume ịkwụsị obi abụọ ọ bụla. Jizos choro olile anya zuru oke n'ebe ayi no, n'ihi na o kwuputara obe ya, nbilite n'onwu, nmekorita ya na Chineke na nbiabia ya nke abua, maka abamuru ayi. Onye na-agọnahụ eziokwu ndị a na-akpọ ya onye ụgha.
Ụdị ịhụnanya nke Onyenwe anyị mebiri Thomas, ọ na-atụgharịkwa (dịka nchikota nke ekpere ya na ntụgharị uche) nkwupụta kasị ukwuu mmadụ mere nye Jizọs, "Nna M NA CHINEKE M!". Ọ ghọtara na ọ na-agụsi agụụ agụụ ike maka eziokwu, na Jizọs abụghị Ọkpara Chineke ma e wezụga nna ya, ya onwe ya bụ Onyenwe anyị, nwere oke nke chi n'ime ahụ. Chineke bụ otu, ọ bụghị okpukpu abụọ. Thomas kpọrọ Jizọs Chineke, ma mara na Onye Nsọ a agaghị ekpe ya ikpe n'ihi enweghị okwukwe ya, ma nye ya amara nke ịhụ Onyenwe anyị n'onwe ya. Tomas na-akpọkwa ya Onyenwe anyị, ma nyefee aka ya na ọdịnihu ya kpamkpam n'ime aka Onye nzọpụta ya, na-ekwenye ihe siri ike na ihe Jizọs kwuru na okwu nkuzi ya. Nwanna, gịnị ka ị na-ekwu? Ị keere òkè n'ekwupụta Tomas? Ndi bilitere onye biara n'ihu gị, nke mere na ị na-ama jijiji site na ebube ya ma merie obi abụọ gị na igbochi obi gị? Were onwe-gi gosi ebere-Ya, kwuputa n'iru Ya, si, Onye-nwem na Chinekem.
EKPERE: Anyị na-ekele gị, Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, n'ihi na ị jụghị obi abụọ Thomas, kama igosipụta onwe gị. Nabata ndụ anyị ịbụ nke aka gị, ma wepụ ire anyị nke aghụghọ niile.
Gịnị ka ikwupụta nkwupụta Tomosi pụtara?